Xog:- Shariif Sakiin oo noqday ganacsadaha leh saamiga ugu badan ee banki caalami ah oo kuyaal Jabuuti. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Xog:- Shariif Sakiin oo noqday ganacsadaha leh saamiga ugu badan ee banki caalami ah oo kuyaal Jabuuti.
Wargeyska afka dheer ee Indian Ocean ayaa maanta oo isniin ah qoray in isbeddel weyn oo dhanka maamulka iyo saamiga ah uu ka dhacay Bankiga Salaam African Bank ee dalka Jabuuti.
Warbixint wargeyska ayaa lagu sheegay in afhayeenkii hore ee baarlamanka Soomaaliya iyo madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan uu noqday qofkii labaad ee saamiga ugu badan ku leh bankiga.
Shariif Xasan ayaa ku xiga saami laha ugu weyn bankiga oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Axmed Cali oo madax ka ah shirkadda guryaha ee Al-Rayaan, sida warbixinta ay tiri.
Wargeyska ayaa sidoo kale sheegay inay suurta-gal tahay in Shariif Xasan uu dhowaan ku biiro guddiga maamula Bankiga, oo sidoo kale ay ka mid yihiin Maxamed Axmed Cali iyo Cusmaan Ducaale Dirir.
Xiriir aan la sameynay Shariif Xasan si aan wax uga weydiino arrintan nooma suurta-gelin inaan jawaab ka helno.
Shariif Xasan oo ka degay xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed bishii November ee sanadii 2018 kadib dagaal siyaasadeed adag oo uu la galay dowladda federaalka, ayaan lagu arag saaxadda siyaasadda iyo goobaha dadweynaha tan iyo markaa.
Previous articleNisa oo suaalo waydiinaysa masuul katirsan gobolka banaadir oo looga shakisan yahay qaraxii dowladda hoose.
Next articleAkhriso:- Maxay ahmiyad ah oo ay leedahay xuska aasaaska puntland xilli dayac badan uu jiro?.
Atoore July 29, 2019 At 3:23 pm
Qofkii maal xaaraam ah xalaashada xisaab weeyn oo an waxba la inkiri karin oo an laga murmi karin oo an waxba la isweydiinayn baa sugaysa.Nabi Muxammad (scw) waxuu yiri war maalka ummadda qofkii xaqdaro ku cunaa waxuu la mid yahay qof LIQAY dhinbilo dab ah.Saa asaxaabtii baa tiri Rasuul Alloow see baa loo liqi karaa dhinbilo dab ah?Suuye Nabigii (scw) haddeed maalka ummaddu waa maal ogoomeed.Qofkii maal Ogoomeed bilaash ku cunana waxuu la mid yahay qof liqay dhinbilo DAB ah.Calaa kulli xaal rag badan baa ku jira arintaas oo ay sugaysaa xaajo aysan iska difaaci karin.Waxba tari mayso Hebal baa qaatay intaas oo malyuun iyo intaas oo guryo ah buu ka dhistay Kenya iyo Turki.